Chelsea oo qorsheeneysa in heshiiska Timo Werner ay ku garaacdo kooxaha Liverpool iyo Man United – Gool FM
(London) 29 Maajo 2020. Wargeysyada Jarmalka ka soo baxa ayaa waxay shaaca ka qaadeen qorshaha kooxda Chelsea ay kula soo wareegeyso weeraryahanka RB Leipzig ee Timo Werner xagaaga soo aadan.
Timo Werner ayaa bar-tilmaameed u noqday kooxo badan ee horyaalka Premier League ah, kaddib markii uu badnhig fiican ka sameeyay horyaalka Jarmalka xilli ciyaareedkan, iyadoo Liverpool iyo Manchester United ay sidoo kale isha ku hayaan.
Wargayska “Bild” ee dalka Germany uu sheegay in daafaca kooxda Chelsea ee Antonio Rüdiger uu isku dayayo inuu ku qanciyo Timo Werner imaatinka garoonka Stamford Bridge, halkii uu u dhaqaaqi lahaa kooxaha Liverpool iyo Manchester United.
Xiddigaha Timo Werner iyo Antonio Rüdiger ayaa la fahansan yahay inuu xiriir wanaagsan ka dhexeeyo, kaddib markii ay ka soo wada ciyaareen kooxda Stuttgart.
Wargayska “Bild” oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaas ku sii daray in tababare Frank Lampard uu in mudo ah xiiso balaaran ka muujiyay adeega Timo Werner, wuxuuna doonayaa inuu ka dhigo xiddig muhiim ka ah kooxda Chelsea.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in heshiiska Timo Werner uu ku joogo kooxda RB Leipzig qiimo lacageed dhan 49 million pounds, ciyaaryahanka ayaana doonaya inuu u dhaqaaqo Liverpool xagaaga soo aadan.
24-jirkan ayaa u ciyaaray 40 kulan tan iyo markii uu bilaabay tan iyo bilawga xilli ciyaareedkan kooxdiisa RB Leipzig, wuxuu ku guuleystay inuu dhaliyo 31 gool, wuxuuna qandaraaska uu hadda ku joogo kooxda reer Germany uu dhacayaa June 2023.